Isimo Sezulu - Inethiwekhi Yezulu | I-Web Meteorology (Ikhasi 3)
Sichaza ukuthi yini ama-tide nokuthi asebenza kanjani. Uzofunda futhi ngamatafula ama-tide nokubaluleka kokudoba. Ngena ufunde konke.
UMax Planck wayengusosayensi owaguqula i-physics kuze kube manje. Faka lapha futhi ufunde konke ngokutholwa kwakhe nangethiyori ye-quantum.
Sikutshela zonke izimfihlo ngemvula yezinhlanzi namaxoxo. Kungumcimbi ongajwayelekile okwaziwa kancane ngawo. Ngena uthole.
Kulokhu okuthunyelwe ungafunda zonke izici nokusatshalaliswa kwesimo sezulu esishisayo esishisayo. Faka lapha ukwazi konke.
Ama-avalchchi eqhwa yilokho kudilika komhlaba okubangelwa emithambekeni ngezizathu ezahlukahlukene ongafunda ngazo kulokhu okuthunyelwe. Ngena uthole.
Kulesi sihloko sizokutshela zonke izimfihlo, ilukuluku futhi sichaze ukuthi kungani kwakhiwa ihlobo laseSan Martín. Ngena uthole.
Isimo sezulu sasolwandle senzeka ezindaweni eziseduze nomthamo omkhulu wamanzi. Ngabe ufuna ukufunda konke mayelana nalolu hlobo lwesimo sezulu? Lapha ungathola konke.
Umthelela wezemvelo wezitofu zokhuni namalahle ezindaweni zasemakhaya
Ukusetshenziswa kwezitofu zokhuni namalahle kudala umthelela omkhulu emvelweni ezindaweni zasemakhaya. Funda konke ngakho lapha.
Yazi ukuthi yiziphi izinto zesimo sezulu kanye nezici ezizichazayo.Kuncike ekutheni ingabe isebenza kangcono noma yimbi kakhulu kwisizini ngayinye? Yithole lapha
Izintaba ZaseRocky ziyizintaba ezimenyezelwe njenge-UNESCO njengeNdawo Yamagugu Omhlaba. Thola zonke izici zayo nokuqeqeshwa lapha.
EPlanethi yoMhlaba kunezinhlobo eziningi zesimo sezulu ngokuya ngokuhlukahluka okuningi kanye nendawo esikuyo. Ngena ufunde konke.
Uhla lwe-Himalaya luqukethe izintaba eziphakeme kunazo zonke emhlabeni ezifana nesiqongo se-Everest. Ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngaye?
Izintaba i-Appalachian ziyisikhumbuzo sangempela semvelo esinezinto eziningi zezilwane nezitshalo. Ngabe ufuna ukwazi konke mayelana nale ndawo enhle yemvelo?
Isikhathi se-Quaternary siyingxenye yokugcina yomlando woMhlaba, yazi yonke imicimbi ebaluleke kakhulu emake le nkathi.
UJohn Dalton wayengusosayensi wamakhemikhali futhi enesifiso semeteorology owanikela kakhulu emhlabeni wesayensi. Bazi lapha.
Umjikelezo we-hydrological uyinqubo ebalulekile yokuthi kube nokuphila eMhlabeni njengoba sazi. Funda konke ngakho lapha.
Iwashi le-athomu linembe kunawo wonke umuntu ake awakha. Inezinhlelo ezinhle emhlabeni wesayensi futhi kulokhu okuthunyelwe uzofunda ngazo.
Kulokhu okuthunyelwe sichaza izinhlobo ezahlukahlukene zamaminerali akhona emhlabeni. Faka lapha bese uthola zonke izakhiwo zayo.
Intaba-mlilo eqhumayo ingaba yingozi kakhulu uma inengxenye enkulu yabantu engayithinta. Uyazi ukuthi yiziphi izintaba-mlilo ezizoqhuma?
Izilawuli zesimo sezulu yizici ezibonisa indawo ethile yendawo. Funda konke ngazo lapha.
Isikhathi seqhwa kwakuyisikhathi esenzeka ekupheleni kweCretaceous lapho okungaphezu kwama-35% ezinhlobo ezihlala eMhlabeni zaphela. Thola!
Yini iTheory of Plate Tectonics? Yikuphi ukunyakaza kwamapuleti etektoni akhona? Thola konke lokho nokuningi lapha.
Isikhathi seMesozoic sibonakala ngokuba khona kwama-dinosaurs nokuthuthukiswa kwezilwane ezihuquzelayo. Ngabe ufuna ukwazi konke ngakho? Ukungena!
URobert Hooke wayengusosayensi nefilosofi ebaluleke kakhulu emhlabeni wesayensi. Thola ukubaluleka kokutholwa kwakhe lapha.
I-psychrometer iyidivayisi yokulinganisa esetshenziselwa ukwenza izilinganiso zesimo sezulu. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi kuyini nokuthi kusebenza kanjani? Ukungena!
I-Advection yinto ebaluleke kakhulu okufanele icatshangelwe ku-meteorology. Kulesi sihloko uzokwazi konke ngokujulile. Ulindeni?
I-Phenology ifunda ngemijikelezo yempilo yezinto eziphilayo. Kuyadingeka ukukhulisa umkhiqizo futhi wazi izinto eziphilayo. Ufuna ukwazi okwengeziwe?
I-cryosphere yindawo yoMhlaba embozwe yiqhwa noma iqhwa. Ifeza imisebenzi eminingi esimweni sezulu seplanethi. Ufuna ukwazi okwengeziwe?
I-thermostat ye-WIFI inguquko emhlabeni wokushisa. Yazi ngokujulile konke ukusebenza kwale divayisi lapha.
ULuke Howard wayengusokhemisi owayenothando lwezemvelo okwazile ukuqamba amafu. Yazi konke ngaye lapha.
Izinhlobo zamafu zihlukahlukene kakhulu esibhakabhakeni sethu. Ngayinye imele isimo sezulu. Funda konke ngazo lapha.
I-Precambrian Aeon iyona ekhomba ukuqala komlando weplanethi yethu. Nazi izinqubo zokwakheka kwempilo. Ngabe uyafuna ukuyazi?
Ishadi lesimo sezulu liyithuluzi elisetshenziswa kabanzi kwizimo zezulu. Lapha ungazi ukuthi kwenziwa kanjani nokuthi yini okuguqukayo okukuso.
ICenozoic yisikhathi esaqala eminyakeni eyizigidi ezingama-66 edlule futhi safaka izinguquko eziningi. Ngabe ufuna ukwazi konke ngalesi sikhathi?
I-glaciation yisikhathi lapho iplanethi imbozwe kakhulu ngamakhemikhali asepholini futhi ikhipha isikhathi seqhwa. Thola konke lapha.
Ihlobo laseSan Miguel lenzeka cishe njalo ngonyaka ekupheleni kukaSepthemba eSpain. Ngabe ufuna ukwazi izici zayo?
Amagagasi entwasahlobo yizinto ezikhiqizwa isenzo samandla adonsela phansi elanga nenyanga. Zenzeka nini futhi zakhiwa kanjani?
Lapha ungafunda lonke ulwazi mayelana nentaba-mlilo yaseKilauea. Funda ukuthi lakhiwa kanjani, linomsebenzi onjani nokuthi lidala muphi umonakalo.
Funda ukutolika imephu yesimo sezulu futhi uqonde izimpawu ezikuso. Ngabe ufisa ukwazi okwengeziwe ngalokhu?
Thola impumelelo kasosayensi u-Alfred Wegener, owashintsha ngokuphelele indlela esibona ngayo uMhlaba ngo-1912. Uyafuna ukufunda ngaye?
Funda ngayo yonke inqubo yokuthola amandla avuselelekayo njenge-biomass, ezinhlotsheni zayo, ukwelashwa kwayo kwangaphambilini kanye nezinqubo zokuguqulwa kwe-biomass
Funda ukusebenzisa isikhathi se-geological futhi uqonde ukuvela kweplanethi yoMhlaba. Kulokhu okuthunyelwe ungafunda konke ngakho.
Izinhlobo zamadwala, ukwakheka nezici
Kulokhu okuthunyelwe uzokwazi izinhlobo ezahlukahlukene zedwala ezikhona, izici zazo nezimo zokwakheka. Ngabe ufuna ukufunda ngakho?
Yini okuguqula amaphutha nokuthi akhiwa kanjani
Thola ukuthi yini ukwehluleka okuguqukayo kanye nenqubo yokwakheka kwayo. Kunamthelela muni esiqongweni somhlaba?
Funda kabanzi ngokwakhiwa kwephansi lolwandle nama-guyots kulokhu okuthunyelwe. Zakhiwa kanjani lezi seounts?
Kulokhu okuthunyelwe uzofunda umsuka, izici eziyinhloko namandla wegebe lasolwandle. Ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngayo?
Kuyini, yakhiwa kanjani nezimpawu zeqhwa
Inguzunga yeqhwa ukwakheka kwemvelo okubaluleke kakhulu kwezidalwa eziphilayo. Thola ukuthi lakhiwa kanjani nazo zonke izici zalo kulokhu okuthunyelwe.
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngokuthi amaconsi amanzi akhiwa kanjani nokuthi athatha siphi isimo ngokuya ngomzuzu. Ufuna ukwazi okwengeziwe?
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngezinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene ezikhona ukunikeza izixwayiso ze-alamu yemvula. Ngazo ungazi ngaso sonke isikhathi ukuthi izokuna nini futhi kuphi.
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngokwakhiwa kweqhwa, i-geometry yamakhekheba eqhwa nezinhlobo zeqhwa ezikhona. Ngabe ufuna ukufunda konke ngakho?
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngezakhiwo nokusetshenziswa kweqhwa elomile. Uma ufuna ukwazi kabanzi ngakho futhi ufunde ukuthi ungakwenza kanjani ekhaya, lokhu okuthunyelwe kwakho.
Kulokhu okuthunyelwe sikhuluma ngezici zamagagasi, izingxenye zamaza nokuthi amagagasi amakhulu akhiwa kanjani. Ngabe ufuna ukufunda kabanzi?
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngezici ze-hygrometer nezinhlobo ezahlukahlukene nezinsiza ezinakho. Ngabe ufuna ukwazi ukubaluleka kwama-hygrometer?
I-equinox yasentwasahlobo yisikhathi esikhetheke kakhulu sonyaka, lapho imini nobusuku cishe kunamahora afanayo. Thola ukuthi kwenzeka nini!
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma nge-radar yemvula, izici zayo nokuthi isebenza kanjani. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi izazi zezulu zibikezela kanjani imvula?
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngesimo sezulu esingajwayelekile esaziwa njenge-halo yelanga. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi yakhiwa kanjani nokuthi ungayibona kuphi?
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngezici nokusizakala kwemvula noma amamephu emvula ezazi zezulu nokubikezela isimo sezulu. Ngabe ufuna ukufunda ukuhumusha?
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngokuthi umoya wasolwandle uyini, wakha kanjani futhi nini nezimpawu eziyinhloko. Ufuna ukwazi okwengeziwe?
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngomphumela wokushisa komhlaba kwizinguzunga zeqhwa zase-Ecuador. Yini engenziwa ngochwepheshe kulesi simo?
Njengoba iplanethi ifudumala, izitshalo ziqala inkathi yazo yokukhula kusenesikhathi, zivezwe amakhaza entwasahlobo.
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngokuthi ayini amagagasi, izici okuncike kuzo ukwakheka kwazo nezinhlobo ezahlukahlukene. Ngabe ufuna ukwazi konke ngabo?
Uma ungomunye walabo abakuthokozelayo ukubuka imisebe, sebenzisa konke ongakwenza, ngoba ngasekupheleni kwekhulu leminyaka kungenzeka ukuthi bancishiswe kuze kufike ku-15%.
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngezinhlelo zokulwa nesichotho kanye nemiphumela yazo emvula yaseGallocanta Lagoon. Ufuna ukwazi okwengeziwe?
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngokuhlolwa kwamachibi okwenziwa eSpain nasePortugal ukwazi imithelela yokuguquka kwesimo sezulu ezindaweni ezahlukahlukene zemvelo.
Isihlangu esivikela impilo eMhlabeni, ungqimba lwe-ozone, siyaqhubeka nokuba buthakathaka, ikakhulukazi ezindaweni ezinabantu abaningi kakhulu, lapho ukungcola kuyinkinga ebucayi khona. Faka ukuze wazi kabanzi.
Ebusika i-Arctic nayo ilahlekelwa yiqhwa. Izinga lokushisa liphezulu kakhulu ukuthi lingahlala, kangangoba abacwaningi balindele ukuthi lizonyamalala ngokuphelele njalo ehlobo kusukela ngonyaka ka-2030.
Ngokwesifundo esisha, ukukhishwa kwe-aerosol kuvikela eminye imisebe yelanga. Uma lezi zisuswe, izinga lokushisa lomhlaba jikelele lingakhuphuka ngama-degree angu-1,1 ngaphezulu.
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngesimo semigxobhozo ngoSuku Lwamaxhaphozi Lomhlaba eligujwa ngoFebhuwari 2. Ufuna ukwazi okwengeziwe?
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngesimo seGrey Glacier nokulahleka kwayo kweqhwa. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi sinjani isimo?
Ungathanda ukuba nefu elintantayo endlini yakho? Manje usungakwenza kwenzeke ngenxa yomklami uRichard Clarkson. Ngena ubheke umklamo wayo.
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngezimo zemvelo lapho izilwane ezincelisayo nezinyoni zijwayela kangcono ukuguquka kwesimo sezulu. Ufuna ukwazi okwengeziwe?
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngezici eziyinhloko nokwakheka kwamafu e-cirrus. Ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngabo?
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngocwaningo olwenziwe ngomthelela wokushintsha kwesimo sezulu esomeni esigodini somfula iJúcar. Ufuna ukwazi okwengeziwe?
Ukungena komoya obandayo waseSiberia eJapan kubhalisa amazinga okushisa aphansi kunawo wonke eminyakeni engama-48 kanti okubi kakhulu ukuthi akukapheli.
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngezimpawu zokutholwa kocingo lwe-ozone olutholwe ngenxa yezilinganiso zesathelayithi.
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngesathelayithi yeSentinel 5-P namandla ayo okuthatha izithombe ze-HD zokungcola komoya. Ufuna ukwazi okwengeziwe?
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngezimpawu nencazelo yegulf, umehluko ne-bay kanye ne-cove kanye namagebe amakhulu emhlabeni. Ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngayo?
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngezinyathelo ongazithatha ukusiza ukulwa nokuguquka kwesimo sezulu. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi yini ongayenza?
Uma uthanda isiraphu ye-maple, ngena sizokutshela ukuthi kungani inganyamalala emakethe amashumi eminyaka ezayo. Ungaphuthelwa.
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngesomiso i-Dry Corridor yaseCentral America ehlupheka ngenxa yokuguquka kwesimo sezulu.
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngamaphutha enziwe lapho kufundiswa ngokuguquka kwesimo sezulu. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi ziyini?
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngomsebenzi wentaba-mlilo owenziwa yintaba-mlilo iMayon ePhilippines nabantu okudingeka bakhishwe.
Konke odinga ukukwazi mayelana nezintaba-mlilo
Kulokhu okuthunyelwe uzofunda izinhlobo zokuqhuma kwentaba-mlilo, ukuthi zisebenza kanjani nezingxenye zentaba-mlilo. Ufuna ukwazi okwengeziwe?
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngemvula eyenzeke ekuqaleni kuka-2018 namanani ayo ngaphezu kokujwayelekile.
Lokhu okuthunyelwe kufingqa amazinga okushisa nemvula okwenza u-2017 ube ngomunye wemfudumalo nowomileyo emlandweni.
Siyakutshela ukuthi yini umehluko phakathi kwesimo sezulu nesimo sezulu, izayensi ezimbili ezifanayo kodwa ezinomgomo ohlukile.
Ukukhuphuka kwamazinga okushisa olwandle endaweni yeGreat Barrier Reef kunciphisa inani lofudu oluhlaza lwase-Australia. Thola ukuthi kungani.
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngezenzakalo ezahlukahlukene zezinkanyezi ezizokwenzeka ngonyaka we-2018. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi ziyini?
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngesiphepho esenzeka e-United States njengamanje. Ngabe ufuna ukwazi konke okwenzekayo?
Ukutshala imali kwingqalasizinda eluhlaza kuyisihluthulelo sokuzivumelanisa kangcono nokuguquguquka kwesimo sezulu
Iqembu lososayensi baseSpain batshala imali kwingqalasizinda eluhlaza ukuze amapaki ezwe aleli zwe akwazi ukuzivumelanisa kangcono nokuguquka kwesimo sezulu.
Ukuncibilika kweqhwa kungasiza ngokwengxenye ukuguquka kwesimo sezulu
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngocwaningo oluthi ukuqhwaqhwa kweqhwa kunomthelela ekwandeni ukumuncwa kwe-CO2 emahlathini abolile. Ufuna ukwazi okwengeziwe?
Lokhu okuthunyelwe kufingqa umonakalo odalwe yisiphepho uBruno eSpain. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi bebeyini?
Ucwaningo olusha luveze ukuthi i-Antarctic krill, i-crustacean engamasentimitha ambalwa ubude, igcina inani elikhulu le-CO2. Ngena uthole.
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngeMediterranean Cystoseira kanye nokuba sengozini kwayo emiphumeleni yokushintsha kwesimo sezulu. Kukuthinta kanjani?
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngemiphumela yokuguquka kwesimo sezulu ekwandiseni ukusabalala kwezifo ezithathelwanayo. Yikuphi?
E-Antarctica ukuthola ukuthi ukuguquka kwesimo sezulu kuthinta kanjani ama-penguin
Isazi sezinto eziphilayo uJosabel Benlliure uchitha uKhisimusi e-Antarctica ukuthola ukuthi ukuguquka kwesimo sezulu kuwathinta kanjani amaphengwini.
Isiphepho uBruno ufika eSpain, okokuqala ebusika
UBruno uyisiphepho sokuqala ukusishaya kulobu busika futhi owesibili ukuqanjwa. Ngabe uyafuna ukwazi ukuthi kuzosithinta kanjani?
Ucwaningo luqinisekisa ihlobo elome kakhulu emakhulwini eminyaka amuva nje
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngocwaningo oluqinisekisa ukuthi ihlobo elome kakhulu lirekhodiwe emakhulwini eminyaka amuva nje. Ngabe ufuna ukwazi ngalolu cwaningo?
NgoNovemba 2017 bekungokwesihlanu okufudumele emlandweni orekhodiwe
Inyanga kaNovemba 2017 ibe ngeyesihlanu ifudumele kwazise kunamarekhodi. Izinga lokushisa lomhlaba jikelele liyanda ngokwanda.
Buzobanjani ubusika noKhisimusi kulo nyaka?
Lo mbhalo uzofingqa izici uKhisimusi nobusika zonyaka ka-2018 ozoba nazo.Ngabe uyafuna ukwazi ukuthi kuzoba njani?
Lapha sizokhuluma ngesifinyezo sonyaka wezulu ka-2017. Zonke izehlakalo ezenzekile neziphawuleka kakhulu. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi ziyini?
Ithimba leLwandle Legacy liqophe imizuzu yokugcina yokuphila kwebhere elimhlophe, isisulu esisha sokuguquka kwesimo sezulu. Ngena sizokutshela ukuthi kungani.
Ukushintsha kwesimo sezulu kunezivinini ezimbili: ukuthuthuka kwayo kwemvelo kanye nezingxoxo zokukumisa. Kwenziwani?
Ukuguquka kwesimo sezulu akuthinti wonke umuntu ngokulingana. Kunamazwe asengozini kakhulu futhi, ngakho-ke, azohlupheka kakhulu. Yimaphi amazwe?
Novemba 2017: inyanga yesomiso eSpain
Sikulethela isifinyezo sanyanga zonke se-AEMET, esiveza ukuthi inyanga kaNovemba 2017 yayomile kakhulu futhi ijwayelekile emazingeni okushisa.
Kungani izivunguvungu manje zinamagama? Kusukela ngoDisemba 1, 2017, lezi ziphepho zizothola igama elifanele. Ngena sizokutshela ukuthi kungani.
Ithimba liphenye iziphakamiso ezenziwe amazwe aseSivumelwaneni saseParis zokwehlisa amazinga okushisa futhi nansi imiphumela.
Ukuguquka kwesimo sezulu kwandisa ukungena kothuli lwaseSahara eSierra Nevada. Ingabe lolu thuli luyithinta kanjani imvelo?
Umthetho wakusasa azowubhala ngokushintsha kwesimo sezulu uzobheka ushintsho olufanele kuyo yonke imikhakha. Ngabe lokhu "kuguquka nje" kususelwa kuphi?
Inhlabathi njengesikhali esisebenzayo ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu
Inhlabathi iyakwazi ukugcina i-carbon ekhona emoyeni futhi ngaleyo ndlela ibambe iqhaza ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu. Ufuna ukwazi okwengeziwe?
Sikutshela ukuthi yiziphi izindawo ezibanda kakhulu eSpain. Thola ukuthi yiliphi izinga lokushisa eliphansi kakhulu eliqoshwe ezweni.
Ngokusho kocwaningo olusha, izinhlayiya zemvelo ezisemkhathini ziyakwazi ukupholisa iplanethi eminyakeni efudumele. Faka ukuze wazi kabanzi.
Kwezomnotho uDimitri Zenghelis, ukuguquka kwesimo sezulu kuyithuba lokukhula komnotho. Ingabe kunjalo ngempela?
Ukukhuphuka kwamazinga okushisa omhlaba ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu kudale ukuthi iGrey Glacier iqhekeke. Ufuna ukwazi okwengeziwe?
Ngamazinga okushisa afudumele kanye nokulahleka kwendawo okuhlala kuyo, izidlo eziphakathi nendawo zisengozini enkulu ekushintsheni kwesimo sezulu.
Ukuxhasa amaphrojekthi wokumisa ukuguquguquka kwesimo sezulu kukhona uhlobo olukhethekile lwemali olubizwa ngama-cryptocurrensets. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi zisebenza kanjani?
ENtabeni i-Agung kukhona intaba-mlilo iBali futhi kungenzeka ukuthi isengcupheni yokuqhuma okukhulu. Ngabe ufuna ukwazi okwengeziwe ngentaba-mlilo iBali nomlando wayo?
Njengoba izinga lokushisa lomhlaba wonke likhuphuka, ingcebo ebaluleke kakhulu emhlabeni ingaba sengozini. Faka bese uthola ukuthi kungani.
Njengoba izinga lokushisa eliphakathi komhlaba likhuphuka, ukuguquka kwesimo sezulu kunemiphumela yezempilo edinga ukulungiswa. Sichaza ukuthi kungani.
ISpain, izwe elisengozini enkulu ekuguqukeni kwesimo sezulu, liyaqhubeka ngaphandle kokuthatha izinyathelo zokubhekana nalo. Yile ndlela amadolobha amaningana asilahle ngayo lesi simo. Ukungena.
I-bamboo lemur ibulawa yindlala ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu
I-bamboo lemur ingumdabu waseMadagascar onenkinga enkulu yokuzivumelanisa nezimo zezulu. Faka bese uthola ukuthi kungani.
Ososayensi baye baxwayiswa yiqembu lamabhere asezindaweni ezibandayo angama-200 adla umkhoma ogwini lwaseWrangel Island (eSiberia). Faka bese uthola ukuthi kungani.
Ngokusho kocwaningo olusha, ukufudumala kwembulunga yonke akuzange kume ngesikhathi sika-1998-2012. Futhi hhayi lokho kuphela, kepha i-Arctic manje isengozini kakhulu.
Bekungaba njani umhlaba uma ulwandle lukhuphuka? Manje usungathola ngemephu exhumanayo eyenzelwe ukubikezela ukuthi ukuncibilika kuzokuthinta kanjani.
I-COP23 eBonn isiphelile futhi ngalokhu, sekubhalwe phansi umqulu oqukethe imithetho okumele ilandelwe. Uqukethe ini lo mbhalo?
Sikutshela indaba ethakazelisayo kaVyacheslav Korotki, isazi sezulu sezulu esineminyaka engama-63 esihlala futhi sisebenza e-Arctic. Ukungena.
Imbobo kusendlalelo lwe-ozone imisiwe okokuqala emhlabeni. Unjani umbono we-ozone ku-stratosphere yethu?
Ifu elisebenza ngemisebe iRuthenium 106 selibe ngaphezu kweYurophu isikhathi esingaphezu kwenyanga. Uphenyo lwe-IRSN lukhipha imiphumela empilweni yabantu.
Akhiwa kanjani amalambu asenyakatho?
Izibani ZaseNyakatho ziyizinto ngokuqinisekile wonke umuntu ezwile ngakho. Kepha uyazi ukuthi zakhiwa kanjani futhi ngani? Yithole lapha.
I-Supertornado ne-Supercomputer: Ukulinganisa kufinyelelwe
Umcimbi olingisiwe ufinyelele emimoyeni eqhubekayo ebanga ama-320 miles ngehora, yabulala abantu abayi-9 kwalimala abacishe babe ngu-200.
Kungani ulwandle lushintsha umbala?
Wake wazibuza ukuthi kungani ulwandle lushintsha umbala? Unganqikazi ukungena ukuthola impendulo yombuzo wakho. ;)
Ngamazinga okushisa aphakathi kuka-18,5 °, anokungafani okungafika ku-4,1 ° ngaphezu kokujwayelekile, inyanga ka-Okthoba ibe ngeyesibili efudumele kakhulu kusukela ngo-1965.
Wake wazibuza ukuthi amadolobha angcolisa malini? Manje usungathola ukubonga kuGoogle Earth. Faka sizokutshela ukuthi kanjani.
Ngenkathi uDonald Trump ekuphika ukuguquka kwesimo sezulu, umbiko omusha uphetha ngokuthi abantu bawudalile u-95%. Ukungena.
Namuhla ukuvulwa kweBonn Climate Summit (COP23) kwenzeke. Kuhloselwe ukubumba Isivumelwano SaseParis. Ufuna ukuhambisana?
Ukubukwa kwesimo sezulu kuyadingeka ukuze sikwazi ukukhiqiza amamodeli wokubikezela kwesimo sezulu. Ngabe uyafuna ukwazi ukuthi isimo sezulu sibhekwa kanjani?
Ukuzamazama komhlaba okusanda kwenzeka kule ndawo kukhombisa ukuthi intaba-mlilo iBardarbunga, enkulu kunazo zonke e-Iceland, kungenzeka iqhume maduzane.
Ngonyaka odlule ukugcwala kwe-carbon dioxide kwakuphezulu njengoba kwakunjalo phakathi kweminyaka eyizigidi ezi-3 kuya kwezi-5 edlule. Faka sizokutshela ukuthi kungani.
I-Totten Glacier inkulu kunazo zonke empumalanga ye-Antarctica futhi ukuncibilika kwayo kuyashesha ngenxa yemimoya eyanda eSouth Ocean.
Izicelo zeBig Data zifinyelela ekuphathweni kwamanzi. Ukulondolozwa kokuchelela nokuphathwa okungcono kubekwa njengabazongenela ikusasa.
Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka akuwona umphumela wokukhonjiswa kwezilwandle noma okuphambene nalokho. Sikutshela ngokujulile ukuthi kungani lokhu kwenzeka.
Sichaza imiphumela eyinhlekelele ebingaba nayo uma kungaqhuma izintaba-mlilo eziningana ezwenikazi i-Antarctic ngenxa yezifundo ezisanda kwenziwa.
Amafu anomthelela ophindwe kabili emazingeni okushisa ngokuya ngokuthi avela emini noma ebusuku. Sichaza ukuthi kungani lokhu kwenzeka
Kungani umuzwa wokubanda lapho kuneqhwa uncipha?
Sichaza ukuthi kungani uma likhithika umuzwa oshisayo uyanda futhi ukuthi kude nokuba ngumuzwa kuwumphumela wangempela ngenxa yamandla akhishwayo
Ubuwazi ukuthi ukufudumala kwembulunga yonke, ukungcoliswa komhlaba kanye nesomiso kwandisa inani labantu abalwa nezifo? Faka bese uthola ukuthi kungani.
I-ESA izokwenza izivivinyo eLanzarote nososayensi abaningi kanye nezinye izinhlangano zekoloni leMars
INew York ingahlaselwa yizikhukhula ezimbi kunazo zonke emlandweni wayo uma ingathathi isinyathelo sokumisa ukufudumala kwembulunga yonke
Ngaphandle kokuthi kuthathe izinyathelo ezinqala nezishubile ukunqanda ukufudumala kwembulunga yonke, ngasekupheleni kwekhulu leminyaka iNew York ingahlangabezana nezikhukhula ezingaphezu kwamamitha amahlanu.
Ucwaningo luveze ukuthi uma i-carbon dioxide ikhipha kabili, izulu lizoba buthakathaka eNyakatho Melika. Sikutshela ukuthi kungani. Ukungena.
Incazelo yesimo se-optical ye-Brocken spectrum, kanye nomsuka wayo kanye nencazelo yokuthi kungani ivela kanye nezici zayo.
Amahlathi amathathu aseSpain azoba amalabhoratri emvelo
Kukhethwe amahlathi amathathu aseSpain azocwaninga ngemiphumela yokuguquka kwesimo sezulu ukuze akwazi ukuzivumelanisa nezimo. Ufuna ukwazi okwengeziwe?
Sikhuluma ngamafu angajwayelekile e-Morning Glory, kanye nokwakheka kwawo okungajwayelekile nokuncane, kanye nezici abanazo.
Kulo nyaka i-2017 siphokophele komunye weminyaka efudumele kakhulu emhlabeni jikelele, futhi okungenzeka ukuthi yileyo efudumele kunazo zonke eSpain, ngaphandle kwe-El Niño ethintekile.
Ukubuyekezwa kwe-Orionid Meteor Shower. Umsuka, incazelo kanye nencazelo yokuthi ubukeka kuphi nezimo ezihamba phambili zokwenza.
Ingqungquthela elandelayo Yesimo Sezulu (COP23) izobanjelwa eBonn ngoNovemba olandelayo. Yiziphi izici le COP23 enazo?
I-African Union iyaqhubeka nomklamo wokulangazelela wokumisa ukuqhubekela phambili kogwadule ngokuluvimba ngesakhiwo semega odongeni lwezihlahla
ISpain izwe elisengcupheni yokuguquguquka kwesimo sezulu futhi kumele lithathe izinyathelo zokuzivumelanisa nalo. Yini iSpain engayenza?
Kungani iSpain ihlale ine-anticyclone nesimo sezulu esihle kangaka? Isizathu kungenxa ye-Azores Anticyclone. Ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngayo?
Isilingo esaqala eminyakeni engama-26 eyedlule siveza umbuzo obalulekile mayelana nokushisa komhlaba kwenhlabathi enokhuni, uyafuna ukwazi okwengeziwe?
Njengoba iplanethi ifudumala, inkathi eyomile iyohlala isikhathi eside, ngaleyo ndlela yenze imililo yehlathi ibe yimbi kakhulu. Sikutshela ukuthi kungani futhi ungakugwema kanjani.
Incazelo yokuthi buyini ubusika benyukliya, kusukela lapho buqala khona kuze kufike kokwenzekayo, kanye nemiphumela yesibambiso esinayo empilweni yezinhlobo zezinto eziphilayo
Funda ukuthi amafu akha kanjani nokuthi imvula yenzeka kanjani, izimbangela zayo nezinhlobo ezikhona
Uchwepheshe uthi kunobudlelwano phakathi kokuzamazama komhlaba nokuqhuma kwentaba-mlilo
Ngabe bukhona ubudlelwano phakathi kokuzamazama komhlaba nokuqhuma kwentaba-mlilo? Isazi sezintaba-mlilo siyakuqinisekisa, futhi sithatha njengesiphika ukuphika leli qiniso
"Idolobha lokuhlola" elizophinda idolobha elilindelwe iMars
IMars iba ngukugxila komhlaba wonke kwamehlo ngenxa yekholoni elindelekile elizayo. Manje iDubai ivelela iphrojekthi yayo entsha.
Ucwaningo lwakamuva lukhombisa ukuthi iCampi Flegrei ingaba yingozi kakhulu kunalokho obekulindelwe ekuqaleni. Ngalesi sikhathi umagma ubheke kwenye indawo
Izinhlekelele ezinkulu zemvelo zikaSepthemba 2017. Ukuhlanganiswa kwezinto ezibaluleke kakhulu ezenzekile emhlabeni jikelele.
Ukusakazwa kwemimoya e-Argentina kunqunywa ngu-El Pampero, El Zonda noLa Sudestada. Ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngale mimoya?
Funda ukuthi impilo eMhlabeni yavela kanjani nokuthi yakhula kanjani ngesikhathi se-Archaic Aeon. Esinye sezikhathi ezithakazelisa kakhulu zokuma komhlaba
Izibani ebusuku, olwandle nasehlathini
I-Bioluminescence ingukukhanya okukhishwa yizinto eziphilayo ebusuku, ezinye zazo ngokuhamba, kanti ezinye ngokubola. Sichaza ezinye
ILanga lishaya ngamandla kazibuthe womhlaba
Amandla kazibuthe womhlaba ashaywe kuyo yonke inyanga kaSepthemba. Ngama-solar flare anamandla kakhulu kule minyaka eyishumi edlule.
Kungani kuthiwa ihlathi lemvula lilawula isimo sezulu emhlabeni?
Wake wazibuza ukuthi kungani ihlathi lemvula kuthiwa lilawula isimo sezulu emhlabeni? Faka futhi uzothola impendulo. Kuzokumangaza. ;)
Lapho imvula ibonakala ivela kwi-movie ethusayo
Uyazazi zonke izinhlobo zemvula? Ngoba uma ufuna izenzakalo zemvula ezingajwayelekile sikutshela ezinye zezinto ezimbi kakhulu nezesabekayo ezikhona
I-thaw iyaqhubeka nokuthuthuka, futhi kulokhu ikwenza nge-iceberg ephindwe kane ubukhulu beManhattan. Imiphumela yesikhathi esizayo ayinathemba.
Sikukhombisa ividiyo engakholeki, lapho ungabona khona ukuthi isiphepho siphephisa kanjani imimoya emzimbeni wesazi sezulu esibabazekayo.
Kusolwa ukuthi u-27% wesisindo namandla endaweni yonke akhiwe ngokuthiwa yinto emnyama. Yini esiyaziyo ngendaba emnyama?
Umcwaningi eMIT usungule ifomula yezibalo ekhombisa amathuba aphezulu okuqothulwa okukhulu uma amazinga e-CO2 angaweli
Ngokukhuphuka kwamazinga okushisa okubangelwa ukuguquka kwesimo sezulu, ososayensi bakholelwa ukuthi bazokwanda ngamandla ngokwengeziwe
EColombia, kwethulwe iThird National Communication on Climate Change.Lokhu kukhuphuka kwezinga lokushisa kuzowathinta kanjani amazwe?
Ukuzamazama komhlaba okusha okungu-6,1 kwenzeke izolo eMexico. Igagasi lokuzamazama komhlaba elihlasele izwe lonke ngoSepthemba libukeka lingapheli
I-EU ihlaziya isidingo sokunciphisa ukungcola lapho kubhekene nokuguquka kwesimo sezulu
Ngokuya ngokuhlaziywa komhlaba mayelana nesenzo se-EU kwezamandla nokuguquka kwesimo sezulu, isenzo esisebenzayo emkhakheni wamandla sibalulekile.
I-Fall 2017 izofudumala kunokujwayelekile
Ikwindla lingena eNyakatho Nenkabazwe namuhla ngo-22: 02 ebusuku futhi lizoqala ngamazinga okushisa aphezulu nemvula encane. Kuzoba njani ukuwa kuka-2017?
Kutholwe into entsha nehlukile kuSolar System
Ukutholwa okumangazayo kusanda kwenziwa lapho inkanyezi enomsila kanambambili ibonwa okokuqala. Okungukuthi, ama-asteroid amabili ajikelezayo phakathi kwawo.
Izinguzunga zeqhwa zase-Asia ziyancibilika ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu
Ama-65% wobukhulu bezinguzunga zeqhwa eziphakeme zase-Asia zingalahleka uma kukhishwa igesi engcolisa ukushisa.
Kungani umbani uvela ekuqhumeni kwentaba-mlilo?
Incazelo yokuthi kungani izintaba-mlilo eziningi zivame ukuba nemibani lapho iqhuma. Incazelo yesizathu sokuthi le nto ayigcini kuziphepho kuphela
Incazelo yokwakhiwa kwamafu we-pileus ahambisana nezithombe. Ukwakheka okunesifiso nokungajwayelekile okulindele nesikhathi.
Ucwaningo lusungule i-algorithm esiza ekuhlaziyeni idatha yesimo sezulu yezinkomba ezintsha nobufakazi bokushintsha kwesimo sezulu.
Umthombo waseDarvaza. Umnyango Oya Esihogweni
Incazelo yomlando wemvelo nowabantu, odale ukuthi le crater enkulu inamalangabi ishe kungazi muntu ukuthi izophuma nini
AmaGiza, noma okufanayo, avaleleke amanzi angaphansi komhlaba abangelwa ukufudumala abhekana nakho. Sikutshela konke ngabo
Iyoba njani iplanethi yethu eminyakeni eyizigidi ezingama-250?
Ukuhamba okuqhubekayo kwamazwekazi kuzosho ukuthi phakathi neminyaka eyizigidi ezingama-250, iplanethi yethu ngeke ibukeke ifana nse nanamuhla.
Ukusakazwa kwejet ukugeleza komoya ojikeleza ukuphakama ngejubane elikhulu futhi uzungeze iplanethi.Ngabe ufuna ukwazi ukuthi isebenza kanjani?
Ukuguquka kwesimo sezulu kuzokhiqiza abantu abampofu abangaphezu kwezigidi eziyi-100
IBhange Lomhlaba lixwayise ngokuthi ukuguquka kwesimo sezulu kuzokhiqiza abantu abampofu abayizigidi eziyikhulu ngonyaka ka-100 - ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngakho?
Kungani kwakukhona ukufudumala kwembulunga yonke eminyakeni eyizigidi ezingama-56 edlule?
Cishe eminyakeni eyizigidi ezingama-56 edlule, uMhlaba wabhekana nokufudumala komhlaba okungazelelwe, okwaziwa ngokuthi yiPaleocene-Eocene Thermal Maximum.
Ngabe i-geoengineering iyindlela yokubalekela ukumelana nokushintsha kwesimo sezulu?
Izenzo ezenziwa yi-geoengineering ziphakamisa imibuzo yokuziphatha okuhle, ngoba inezingozi ezahlukahlukene emhlabeni.
Khulisa ogwadule? Akuwona umqondo osangene, kuyinto esivele isenziwa
Sichaza izindlela ezikhuliswa ngazo ogwadule nokuthi amaphrojekthi ahlukene asungulwe kanjani iminyaka esivele iyiqiniso
Isimo sezulu sabamba iqhaza elikhulu ekuweni koMbuso WaseRoma
Siyakutshela ukuthi ukupholisa kwesimo sezulu kwaba nokumelwa okuhle kanjani emiphakathini edlule eyashintsha izifundo futhi yathuthukisa impucuko
Yimaphi amalambu abonakala eMexico ngesikhathi sokuzamazama komhlaba?
Isimanga sokukhanya okungajwayelekile esenzeka ngesikhathi kuzamazama umhlaba eMexico sishiye abantu abaningi bebambe ongezansi. Siyakutshela ukuthi kungani kwenzeke lokhu
Kwenzeke ukuzamazama komhlaba ogwini lwaseChiapas, eMexico. Kwakuyirekhodi eliphakeme kakhulu kuleyo ndawo elinobukhulu obungu-8,2 esikalini sikaRitcher.
Imiphumela ehlukile yokuguquguquka kwesimo sezulu ingadala ukuqothulwa kwezinhlobo zezinambuzane zesithathu ngonyaka ka-2070.
Ukwanda kwamazinga okushisa ahambisana nokufudumala kwembulunga kubangela ukuthi uLwandle iCaspian lulahlekelwe amanzi amaningi.
Sikutshela konke mayelana nezintaba-mlilo: zakhiwa kanjani, izinhlobo zezintaba-mlilo ezikhona, kanye nezingxenye ezahlukahlukene ezikuqambayo. Ngoba zikhona? Thola!
Imiphumela yemeteorite ngokumelene neplanethi yethu, ingaba nemiphumela ebulalayo. Sikutshela obekuzokwenzeka, ngale kwama-movie noma ukuqagela.
Konke mayelana nongqimba lwe-ozone Ngabe ufuna ukwazi ukuthi yimuphi umsebenzi ungqimba lwe-ozone olunalo nokuthi lubaluleke kangakanani kubantu?
Isimemezelo sokuzama esenziwe nguHulumeni wamanje waseBrazil, safuna ukumbiwa kwemayini yendawo yehlathi lase-Amazon elilingana neDenmark
Ama-mangrove aluhlobo lwesithiyo esivikela abaseVietnam emiphumeleni efana nokuguguleka nokukhuphuka kwamazinga olwandle.
Ngokukhuphuka okufika ku-6 degrees Celsius ehlobo, ukusetshenziswa komoya kuzokhuphuka nge-6%, okwenza ukufudumala komhlaba kube kubi.
Incazelo ye-eon hadic, ukuthi uMhlaba wakhiwa kanjani, izimo ezazikhona, ukuthi iplanethi yakhulelwa kanjani nokuthi impilo yaqala kanjani ukwenza indlela yayo.
Ukuguquka kwesimo sezulu kushintsha ukufika eSpain »ngezinyoni ezingandile»
Faka sizokutshela ukuthi kungani ukuguquguquka kwesimo sezulu kuguqula ukufika kwalokho okubhekwa njengezinyoni ezingandile ezweni laseSpain.
Uhlelo Lwezigidigidi lwaseChina Lokuhlanza Amanzi Alo!
Ebhekene nekusasa elibekiwe lokudla namandla ezinsiza zamanzi ayo, iChina yenza uhlelo lokuthuthukisa amanzi ayo angcoliswe kakhulu.
ETeide National Park kuneziteshi zezulu eziphethe ukuqapha imiphumela ethinta ukushintsha kwesimo sezulu.
Ngenxa yemvula ngalo Meyi odlule ogwadule olomile nolushisa kakhulu emhlabeni, ugwadule i-Atacama, izinkulungwane zezitshalo seziqhakazile.
Isomiso esihlasela Ugwadule iKalahari sinciphisa inani le-oricteroposo yase-Afrika, elibulawa amazinga okushisa aphezulu.
Ucwaningo ngemiphumela yokungcola kwezempilo kusuka esikhathini esifushane kuya esikhathini eside kanye nemiphumela ekuyo ezinganeni nakwabesifazane abakhulelwe.
Sehlulekile ukulawula ukuguquguquka kwesimo sezulu
Njengoba izinga lokushisa lomhlaba jikelele likhuphuka, abantu abasathathi zinyathelo ezisebenzayo zokunqanda ukuguquka kwesimo sezulu, okulahlekelwe ukulawula kwabo.
Umsuka, siyini nokuthi isikali seBeaufort sisetshenziswa kanjani ngokuya komoya
Isikali saseBeaufort sisebenze eminyakeni engama-200 edlule njengobukhulu bokuqina komoya olwandle nasemhlabeni. Umsuka, umlando nemininingwane
Ukuguquka kwesimo sezulu kuzothinta ezokuvakasha kanye nemvelo yasolwandle
Imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu njengokunyuka kwamazinga olwandle, amazinga aphezulu okushisa kwamanzi, kuzothinta ezokuvakasha kanye nemvelo yasolwandle.
Izinja ezipendwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka bezilokhu zivela eNdiya kulezi zinsuku ezedlule. Imiphumela yokungcola okukuso ingaphezu kokwethusa.
"Something Out There" ukufundwa okunconywayo ngokushintsha kwesimo sezulu
Inoveli isuselwa eqoqweni elikhulu lemininingwane yesayensi ngezehlakalo ezedlule nezizayo, okusisa esikhathini esizayo seYurophu esonakaliswe yisimo sezulu
Ingaphezulu le-supervolcano yaseYellowstone liyashuba!
Imephu ekhishwe yi-United States Geological Survey ikhombisa ukuthi ubuso be-supervolcano buqala kanjani ukukhubazeka ngenxa yokuzamazama komhlaba kwakamuva
Sizokutshela eminye yemiphumela emikhulu neqothulayo yokufudumala komhlaba okuzoba nayo esikhathini esimaphakathi nesikhathi eside.
Incazelo yokuthi yini ifosili nezinqubo ezahlukahlukene ezingenzeka ukuze izinto eziphilayo zenziwe ifossilized etsheni noma kwezinye izinto
Julayi 2017, irekhodi elisha lokushisa lomhlaba jikelele
Amarekhodi ezilinganiso ezahlukahlukene zomhlaba ezithathwe yi-NASA akhombisa irekhodi elisha lokushisa lomhlaba wonke ngenyanga kaJulayi.
Ngabe uLarsen C uncibilika ubangela ukungazinzi?
Ukuqhekeka komgoqo kaLarsen C e-Antarctica kunikeze ososayensi ithuba lokufunda kabanzi ngokuzinza kweshalofu.
Amahlathi ayizipoki, ukubukeka okusha komhlaba
Njengoba izinga lolwandle likhuphuka, amanzi afinyelela phambili ogwini enza amahlathi ayizipoki, izindawo ezintsha zomhlaba.
Ukukhuphuka kwamazinga okushisa okungapheli kuholele abanye ososayensi ukuba baphakamise izindlela zokupholisa iplanethi ngenhloso.
Umehluko omkhulu wezobuchwepheshe, ngenkathi uvame ukuhlotshaniswa nalokho abakulethayo, nokuthi ungakufunda kanjani ukukubona kumamephu we-isobar.
Ekupheleni kwekhulu leminyaka, ukuguquka kwesimo sezulu kuzobulala abantu baseYurophu abalinganiselwa ezigidini eziyi-152 ngaphandle uma kuncishiswa ukukhishwa kwamagesi angcolisayo.
Ukwanda okwenyuka kwamazinga okushisa kuhambisana nokugeleza okwandayo kwemifula nezikhukhula, kususa izinsuku zokuthi zazivame ukwenzeka nini.
Kufanele ubheke kuphi? Yiziphi izindawo ezingcono kakhulu ukuzibona? futhi zivelaphi, ngani? Sichaza konke ngalobu busuku bemilingo!
U-2016 ubungomunye wemfudumalo. Iziphepho zaseTropical, ukukhuphuka kwamazinga olwandle ... yonke into iyaqhubeka nokuba yimbi. Faka ukuze wazi kabanzi.
Ngezindlela ezahlukene, izilwane zinalowo "mqondo wesithupha" wokulindela ukuzamazama komhlaba. Ngale ndlela, bangasabela ngokuhamba kwesikhathi.
Imisinga yasolwandle ikhiqizwa isenzo esihlanganisiwe somoya, amagagasi nobuningi bamanzi. Ngabe ufuna ukwazi konke ngabo?
Izakhiwo zesikhathi esizayo zizosebenza kahle, zihlanzeke futhi zizokwazi ukuzimela, njengeSmart Green Tower, ibhilidi elikhulu elingakhiwa maduze.
Izinhlekelele zesimo sezulu ngenxa yokushisa komhlaba zingadala ukufa kwabantu abayi-152.000 ngonyaka kulo lonke elaseYurophu phakathi kuka-2071 no-2100.
AmaGiant Jets, abizwa nangokuthi ama-Lightning Goblins, aphakathi kwamaBlue Jets namaSprite, ezinye zezinto ezimangalisa kakhulu ukuzibona. Ikakhulukazi imidondoshiya!
Eminyakeni yamuva izinga lokushisa lomhlaba jikelele lenyuke kuphela, kusheshisa ukuncibilika nokukhuphuka kolwandle.
Izakhamizi zaseSpain yizo ezinikeza okubaluleke kakhulu ekushintsheni kwesimo sezulu futhi zikubheke njengengozi enkulu izwe elibhekene nayo.
Izindawo lapho kuzobonakala khona ukusitheka kwelanga, amawebhusayithi azokusakaza ngesikhathi sangempela, kanye nencazelo yokufiphala kwelanga okuhlukile.
UHulumeni waseSpain wethula uhlelo lokugwema imiphumela yenhlekelele enkulu kazwelonke okulindeleke ukuthi yande ngaphandle kokuma.
I-General Directorate of Sustainability of the Coast and the Sea yethule Isu Lokulungiswa Kogu LweSpain Ekuguqukeni Kwesimo Sezulu
Uthi bewazi…? Izintshisakalo owawungazi neze ngeplanethi yethu!
Ukukhethwa kwezifiso ongazi kakhulu ngeplanethi yethu! Ezinye zazo zenzeka njengamanje!
ENdiya, abalimi bazibulala ngenxa yokushisa komhlaba
Abalimi eNdiya bayazibulala ngenxa yokuntuleka kwemvula, yize okubi kakhulu kusazofika: ngo-2050 izinga lokushisa lingakhuphuka ngo-3ºC.
Amazinga okushisa aphakathi komhlaba azokhuphuka ngaphezu kuka-2 ° C ngasekupheleni kwekhulu leminyaka
Ukumisa ukufudumala kwembulunga yonke kuyinselelo enkulu kakhulu ebhekene nezinhlobo zabantu ngekhulu lama-2. Amazinga okushisa emhlabeni wonke azokhuphuka ngaphezu kuka-XNUMX ° C
Ukuguquka kwesimo sezulu kusongela izimpilo zezigidi zabantu. Ukwazi ukuthi ikwazile yini ukulwa, kuzofanele silinde iminyaka eyi-12.
Imithwalo yemfanelo umuntu akholelwa ukuthi isenzo sisatshalaliswa nemvelaphi yokuguquka kwesimo sezulu kubonakala kungachazwa kahle
Ukuntuleka komoya-mpilo kuvame ukuhlanganiswa njengoba sikhuphuka kunezinga lobubi. Kepha akunjalo neze. Uyazi ukuthi kungani?
Ngale kwesikhathi nesikhathi. Njengoba intuthuko ithuthuka, ingakwazi ukwenza ikoloni yayo, indawo yonke, futhi iphile ngaphezu kwayo.
Ukwehla kwemvula phezu kwe-Amazon kubanga umphumela wokukhiya. Yini ebangela ukuguquka kwesimo sezulu e-Amazon?
I-NASA iphakamisa uhlelo lokufuna ukuvelela… Ukuxosha amaMeteorite!
Bazohlaziya imiphumela yomthelela womkhumbi-mkhathi owethulwe ngo-21.600km / h uma uqhathanisa ne-asteroid Didymos ukuhlola ukuthi ikwazi kangakanani ukuphambuka emzileni wayo.
IMaracaibo, ulwandle lwaseVenezuela oluphethe iGuinness World Record yeziphepho zikagesi. Cishe izivunguvungu ezingama-300 ziwela lapho minyaka yonke!
»Uma ungaphansi kweminyaka engama-32 ubudala, awukaze uphile inyanga ezinokushisa komhlaba okungaphansi kwesilinganiso»
Uma ungaphansi kweminyaka engama-32 ubudala, ngaphandle kokuba yiminyaka eyinkulungwane, awukaze uphile inyanga enamazinga okushisa angaphansi kwesilinganiso. Sikutshela ukuthi kungani.
Ukuncibilika kwePermafrost kuyaqhubeka. Manje inani elikhulu legesi le-methane elingakhishwa futhi elenza ukufudumala kwembulunga yonke liyethusa.
I-India, izwe lesithathu elingcolisa kakhulu emhlabeni, seliqalile ukwakha amakhaya aluhlaza ngezinto ezisetshenzisiwe ukuze kuncishiswe ukukhishwa kwawo.
Eminyakeni yamuva nje, ukwanda kokuqashwa kwezimoto kudale izinkinga eziningi eziQhingini zaseBalearic, okuyisona esibi kakhulu ukungcoliswa komoya.
Ukuxhaswa kwehlathi ngamahlathi e-Afrika, isilinganiso esisebenzayo sokulwa nokuguquka kwesimo sezulu
Isilingo e-Uganda sikhombisile ukuthi, ngesikhuthazo esincane, ungagcina imvelo ngokusiza abalimi.
Izinguzunga zeqhwa zasePeru ziyafa ngezinga elingakaze libonwe
IPeru ilahlekelwa izinguzunga zeqhwa ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu. Isizathu salokhu ukuthi ilahlekile eminyakeni engama-55 kuphela, u-61% wawo wonke amaqhwa ayo.
Amavidiyo nezithombe zama-waterpouts amahle kakhulu. Ukuchazwa kwalesi senzakalo, nokuthi kwenzeka kakhulu kuphi.
Namuhla ukuzamazama komhlaba okukhulu okungu-6,4 oLwandle i-Aegean kuzamazamise isiqhingi saseGrisi iKos futhi kwabangela i-minitsunami ogwini lwaseTurkey.
Ukunyuka kwamazinga okushisa emhlabeni kusongela izinguzunga zeqhwa zaseChina. Uma kungenziwa lutho, zinganyamalala eminyakeni engama-50.
Ucwaningo olwenziwe ososayensi abavela e-Institute of Marine Sciences ye-CSIC luphenye imiphumela yokuncibilika ekwakheni amafu.
Iziphepho zelanga azizona izenzakalo ezizimele, kepha ngesiphepho esikhulu selanga ... Kungaba yini imiphumela empucukweni yethu?
Ushintsho emimoyeni lwenza amagagasi kaKelvin, agcina esheshisa ukuncibilika kweqhwa eNhlonhlweni ye-Antarctic.
UDonald Trump an